ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,000 သိန်း (ကျပ်) - S-8798536 | iMyanmarHouse.com
ဤကြော်ငြာမှာ တင်ထားသည့် အချိန်မှစ၍ လေးလပြည့်သွားသောကြောင့် သက်တမ်းကုန်သွားပါပြီ။
ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။
23 Nov 2020 11:13 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
3323 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် S-8798536
ကွန်ဒို ၅ လွှာ 1 ခန်း2ခန်း
[Unicode] 💢💢 ရန်ကင်းမြို့နယ် The Central Residence၊ Tower-2 ရှိ ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး 5th Floor (City View) ကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ 🏢
မကြာသေးမီကမှ ပြင်ဆင်ထားသော အသစ်စက်စက်အခန်းသန့်လေး, (Fully Furnished) , ကားပါကင်ပါအပါ , Laggage ဆွဲပြီး အသင့်တက်နေရုံ အခန်းသန့်လေးကို ဈေးတန်တန်လေးနဲ့ ရောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
👉 လိပ်စာ - The Central Residence၊ Tower -2( ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း နှင့် ကံဘဲ့လမ်းထောင့်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့)
✅ အကျယ် - 1171 sqft / ရောင်းဈေး - 4000 lakhs (Nego) / 5th floor ( City View )
✅ 1 master bed , 1 single bed
😊 မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းကမှ Decoration ပြီးသွားသော အသစ်စက်စက် အခန်းသန့်လေး၊
😊 ခေတ်မီပြီး နေချင်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားသော အခန်းလေး
😊 အချက်အချာကျသော နေရာမှာ တည်ရှိခြင်း၊
👉ရန်ကင်း မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းမကြီးဘေး Sedona Hotel နှင့် Micasa Hotel👌 ကြားတွင်တွင်တည်ရှိပါသည်။
♦️ The Central Residence အနီးနားတွင်
🔹 Myanmar plaza
🔹 Sedona Hotel
🔹 Mercure Hotel
🔹 Yankin Center
🔹 Gamone Pwint Shopping Mall
🔹 Inya lake
✅ Owner မှ ကားပါကင်ပါ တစ်ပါတည်း ဝယ်ယူထားခြင်းကြောင့် Free car park ဖြင့် နေထိုင်တဲ့ကာလတစ်လျှောက် စိတ်ချစွာ Car ရပ်နားနိုင်ခြင်း
✅ Backup generator ပါရှိခြင်း၊ အဆင်မြင့်မားသော လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများပါရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊
✅ မနက်ခင်းလတ်ဆက်သော လေကို ရှူရှိုက်ရင်း အင်းယားကန်ရေပြင်အလှကို ကြည့်ကာ လေံကျင့်ခန်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်း...
✅ ပန်းကန်ခွက်ယောက်နှင့် တခြားသော အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အစုံအလင်ကို ထည့်ပေးထားသောကြောင့် ငှားရမ်းသူဘက်မှ အဆင်သင့် တက်နေနိုင်ခြင်း...
🏢The Central Condo ၏ အားသာချက်များ..
✅ ရန်ကုန်တွင် ပထမဦးဆုံး အဆင့်မြင့် စျေးဝယ်လျှောက်လမ်း 5Stars အဆင့် ရှိ သောရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ကလေးကစားကွင်း၊ပန်းခြံကျယ်ကြီးနှင့် လူကြီး မိဘ များအနားယူအပန်းဖြေနိုင်သောနေရာများထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို တနေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံစွာရရှိနိုငိမှာဖြစ်ပါတယ်!!
💢 Security System 💢
လုံခြုံရေး စနစ်များအနေဖြင့် Smart System, 24နာရီ
- CCTV System , E card System, Sensor System
- အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသော Security team တို့ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုံခြုံရေးအတွက် အလွန်ပင်စိတ်ချစွာ နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
👉👉 ဒီလို ဒီလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေရာလေးမှာရှိတဲ့ The Central Condo အခန်းလေးကို သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းဖြင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းချပေးသွားပါမည်။
#imyanmarhouse_yangon #imyanmarhouse_yankin #imyanmarhouse_condo
[Zawgyi] 💢💢 ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ The Central Residence၊ Tower-2 ႐ွိ ေခတ္မီၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခန္းေလး 5th Floor (City View) ကို ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္။ 🏢
မၾကာေသးမီကမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ အသစ္စက္စက္အခန္းသန္႔ေလး, (Fully Furnished) , ကားပါကင္ပါအပါ , Laggage ဆြဲၿပီး အသင့္တက္ေန႐ုံ အခန္းသန္႔ေလးကို ေဈးတန္တန္ေလးနဲ႔ ေရာင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
👉 လိပ္စာ - The Central Residence၊ Tower -2( ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း ႏွင့္ ကံဘဲ့လမ္းေထာင့္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)
✅ အက်ယ္ - 1171 sqft / ေရာင္းေဈး - 4000 lakhs (Nego) / 5th floor ( City View )
😊 မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ Decoration ၿပီးသြားေသာ အသစ္စက္စက္ အခန္းသန္႔ေလး၊
😊 ေခတ္မီၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အခန္းေလး
😊 အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမွာ တည္႐ွိျခင္း၊
👉ရန္ကင္း ၿမိဳ႕ ကမ႓ာေအးဘုရား လမ္းမႀကီးေဘး Sedona Hotel ႏွင့္ Micasa Hotel👌 ၾကားတြင္တြင္တည္႐ွိပါသည္။
♦️ The Central Residence အနီးနားတြင္
✅ Owner မွ ကားပါကင္ပါ တစ္ပါတည္း ဝယ္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ Free car park ျဖင့္ ေနထိုင္တဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ခ်စြာ Car ရပ္နားႏိုင္ျခင္း
✅ Backup generator ပါ႐ွိျခင္း၊ အဆင္ျမင့္မားေသာ လုံျခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊
✅ မနက္ခင္းလတ္ဆက္ေသာ ေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္ရင္း အင္းယားကန္ေရျပင္အလွကို ၾကည့္ကာ ေလံက်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း...
✅ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ႏွင့္ တျခားေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အစုံအလင္ကို ထည့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းသူဘက္မွ အဆင္သင့္ တက္ေနႏိုင္ျခင္း...
🏢The Central Condo ၏ အားသာခ်က္မ်ား..
✅ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆုံး အဆင့္ျမင့္ ေစ်းဝယ္ေလွ်ာက္လမ္း 5Stars အဆင့္ ႐ွိ ေသာေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမ၊ ကေလးကစားကြင္း၊ပန္းျခံက်ယ္ႀကီးႏွင့္ လူႀကီး မိဘ မ်ားအနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ေသာေနရာမ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တေနရာတည္းတြင္ ၿပီးျပည့္စုံစြာရ႐ွိႏိုငိမွာျဖစ္ပါတယ္!!
လုံျခဳံေရး စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ Smart System, 24နာရီ
- အဆင့္ျမင့္ေလ့က်င့္ထားေသာ Security team တို႔ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔၏လုံျခဳံေရးအတြက္ အလြန္ပင္စိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။
👉👉 ဒီလို ဒီလို ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ေနရာေလးမွာ႐ွိတဲ့ The Central Condo အခန္းေလးကို သက္သာတဲ့ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားပါမည္။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8798536 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(1400sqft)အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ ရွှေမိုးကောင်းကွန်ဒို၊ အသင့်နေ ပြင်ပြီး ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိ
(1150sqft)အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ အောင်ချမ်းသာကွန်ဒို၊ ပြင်ဆင်ထားပြီး ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိ
(951sqft)အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ The Lake Suite Condo, ပြင်ဆင်ထားပြီး မြန်မာပလာဇာ‌ဘေး နေရာအလွန်ကောင်း...
ရန္ကင္း space condo အခန္းေရာင္းမည္
ရန်ရှင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ Condo Facility နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင် အရှေ့လှည့်၊View ကောင်းပြီး
Golden City Condo တြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
ရန္ကင္း ေရႊမုိးေကာင္းကြန္ဒုိတြင္ လူေန/ရံုးခန္း လိုအပ္သူမ်ား အဆင္ေျပေသာ အခန္းငွားမည္
$ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်၊ ရေကူးကန်၊ တန်းနစ်စ်ကွင်း၊ ဓာတ်လှေကား၊ ပရိဘောကအပြည့်စုံပါ...
ရန်ကင်းမြို့နယ် အောင်ဇေယျလမ်းမအနီးတွင် ဈေးတန်မြေသီးသန့် မြေကွက်ကျယ်များ...
the Central Condo (Inyar Lake View)
ကံဘဲ့တာ၀ါ အလွှာမြင့် Viewကောင်းအခန်းကျယ်ရောင်းမည် (၃၀၀၀)သိန်း Bank Transfer ဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ